स्वामी विवेकानन्दका यी १० वाणी जसले तपाईंको जीवन बदल्न सक्छ:: Naya Nepal
महान दार्शनिक स्वामी विवेकानन्दको आज पुण्यतिथि हो । स्वामी विवेकानन्दले मानव जातिका लागि ठूलो योगदान गरेर सन् १९०२ जुलाई ४ मा यस धर्तीबाट विदा भएका थिए ।
पच्चिस वर्षको उमेरमा नै सांसारिक मोह त्याग गरी सन्यासी बनेका विवेकानन्द जीवनभर मानव कल्याणका लागि समर्पित भए ।
स्‍वामी विवेकानन्दले भनेका केही भनाइ यस्ता छन् जसले हामी सबैलाई प्रेरणा दिन्छन् । आज हामी स्वामीको पुण्यतिथिको अवसरमा उनले भनेका १० महान र प्रेरणादायी वाणी तपाईंसमक्ष पस्कन गइरहेका छौं । आशा छ, निम्न वाणीले तपाईंको जीवनमा सकरात्मक परिवर्तन ल्याउने छ :
१. आफूलाई कमजोर सम्झनु सबैभन्दा ठूलो पाप हो ।
२. ब्रम्हाण्डको सबै शक्ति हामीभित्र छ। तर हामीले आफ्ना आँखा आफ्नै हातले ढाक्छौं अनि संसार निकै अन्धकार रहेछ भनेर गुनासो गर्छौं ।
३. सिक्ने र अनुभव बटुल्ने कार्यलाई जीवनभर निरन्तरता दिनुहोस् किनकी अनुभव नै सबैभन्दा ठूलो गुरु हो ।
४. हामीले कहिल्यै पनि अरुको निन्दा गर्नु हुँदैन । यदि कसैलाई सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ भने सहयोग गर्नुहोस् । यदि सहयोग गर्न सक्नुहुन्न भने अञ्जुली जोडेर आर्शीवाद दिनुहोस् र अगाडि बढ्न प्रेरित गर्नुहोस् ।
५. यदि कसैले तपाईंलाई गाली गर्छ भने बदलामा आर्शीवाद दिनुहोस् । किनकी गाली गर्ने मानिसले तपाईंको झूठो दम्भ देखाएर तपाईंलाई नै मद्दत गरिरहेका छन् भनेर बुझ्नुपर्छ ।
६. ज्ञान आफैंमा वर्तमान हो । मानिसले त केबल ज्ञानको आविष्कार मात्रै गर्न सक्छ ।
७. जबसम्म तपाईंले आफैंलाई विश्वास गर्नुहुन्न तबसम्म तपाईंले भगवानप्रति विश्वास गर्न सक्नुहुन्न ।
८. हामीले जति बढी अरुको भलाइ गर्छौं, त्यति नै हाम्रो आत्मा शुद्ध हुन्छ र हाम्रो आत्मामा परमात्माको बास हुन्छ ।
९. तपाईंले भित्रैदेखिनै आफूलाई विकसित गर्नपर्छ । कसैले पनि तपाईंलाई ज्ञानी बनाउन सक्दैनन् । कसैले पनि तपाईंलाई आध्यात्मिक बनाउन सक्दैनन् । आत्मा नै तपाईंको सर्वश्रेष्ठ गुरु हो ।
१०. कहिलेकाहीं मन र दिमागबीच अन्तर्विरोध वा टवराव हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा मनको कुरा नै सुन्नुहोस् ।
नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बार्षिक साधारण सभा नहुने
काठमाडौं, २६ असोज । नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको बार्षिक साधारण सभा नहुने भएको छ । क्यानका शिर्ष दुई पदाधिकारी अध्यक्ष चतुरबहादुर चन्द र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई कोरोना भएर पुर्ण निको नभईसकेकाले यहि असोज २८ र २९ गतेका लागि तय भएको क्यानको साधारणसभा नहुने भएको हो । यो विषयमा आइसीसीलाई पनि जानकारी दिइसकेको बताइएको छ । अहिलेको अवस्थामा भर्चुअलमा पनि साधारण सभा गर्न कठिन भएको क्यानको ठम्याई छ ।
क्यानले कार्यसमितीको बैठकबाट असोजको २८ र २९ गते बार्षिक साधारण सभा गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णयमा सके सबै भेला भएर र नभएमा भर्चुअलमा गर्ने भनिएको थियो । तर त्यो बैठकबाट फर्किए लगत्तै अध्यक्ष चन्द र सचिव अशोकनाथ प्याकुरेललाई कोरोना पोजेटिभ भएको थियो । सचिव प्याकुरेल अहिलेपनि अस्पतालमा उपचार भइरहेको बताइएको छ ।
अब क्यानले बार्षिक साधारण सभा अर्काे महिना गर्र्ने निर्णय गरेको छ । करिव चार बर्ष आइसीसीको निलम्बनमा परेको क्यानको नयाँ कार्यसमिती आएपछि सर्त अनुसार नेपाली क्रिकेटलाई आंशिक फुकुवा गरेको थियो । त्यो बेला आइसीसीले क्यानलाई मुख्य गरि तीन वटा सर्त राखेको थियो । त्यसमा कार्यालय ब्यवस्थापन, बार्षिक साधारण सभा र आर्थिक पारदर्शिता लगायतका थिए ।
दानसाँघु पक्की पुल निर्माण भएपछि जुम्लाबाट जोडियो डोल्पा
जुम्लाबाट डोल्पा जोड्न सडक खण्डको दानसाँघुमा पक्की पुल निर्माण भएपछि औपचारीक रुपमा जुम्लासंग डोल्पा जोडिएको छ । पुल नहुँदा सवारीसाधन बर्षायाममा चल्न सक्दैनथे । हिउँदमा हिउँ र बरफ जम्ने भएकोले यातायातका साथ सञ्चालनमा कठिनाइ थियो । दानसाँघुमा पक्की पुल निर्माण भएपछि अहिले सहजै रुपमा डोल्पाको काइगाउँ सम्म सवारीसाधन निर्वाध रुपमा चलेको ट्याक्टर चालक जयकृष्ण थापाले बताउनुभयो ।
पक्की पुलको कर्णाली प्रदेशका आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले उद्घाटन गरेपछि डोल्पासंग जुम्ला प्रत्यक्ष रुपमा जोडिएको हो ।
यसअघि डोल्पा जुम्ला दैनिक उपभोग्य सामान खच्चरबाट ढुवानी हुने गरेको थियो । अब ट्याक्टर र ट्रकबाट पनि उपभोग्य सामाग्री डोल्पा पुर्याउन सहज हुने भएको स्थानीय व्यापारी पदम कार्कीले बताउनुभयो ।
२०६८ साल असार १५ गते ठेक्का सम्झौता भएर पक्की पुल निर्माणको काम अघि बढेको थियो । देश संघीयताको मोडलमा गएपछि यो पुल निर्माण कार्य अन्यौलमा थियो । पछिल्लो समयमा पुर्वाधार विकास कार्यालय कर्णाली प्रदेशले जिम्मेवारी लिएपछि पक्की पुल निर्माणको काम सकिएको हो ।
अहिले सहजै रुपमा सवारीसाधन संचालन हुने गरेको पुर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाका प्रमुख रुपबहादुर रावलले बताउनुभयो । पहिले ६२ लम्बाइ हुने गरि पुलको स्टमेट भएको थियो । पछिल्लो स्टमेटमा १५ मिटर थप्नु पर्ने भयो । प्रमुख रावलले भन्नुभयो ,“प्राविधिक कारणले गर्दा पुल समयमै बन्न सकेन् । तर ढिलो निर्माण भएपछि निकै गुणस्तरको पुल बनेको छ । अब स्थानीयले उपभोग्य सामान बोकेर लिनु परेन् । ’ कार्यालयले निर्माणको समय थपेर रु १ करोड १४ लाख रुपैयाँ थपेको थियो । यो पुल जिल्लाकै ठुलो पुल रहेको बताउनुभयो ।”
तत्कालिन जिल्ला विकास समितिले निर्माण कार्य प्रारम्भ गरेको पुलको फेरी डिजाइन गर्नु पर्ने भएकोले ढिलो निर्माण भएको हो । निर्माण व्यवसायी दुई जना फेरिए । जिल्ला विकास समितिले गरेको स्टमेट अनुसार ६२ मिटरको पुल दुई करोड ८८ लाख ३० हजार ८ सय ३ रुपैयाँ ३८ पैसामा निर्माण गर्ने गरि सम्झौता भएको थियो । एसबीएआई बन्दन भगवति जेभी कुपोण्डोल ललितपुरले निर्माणको जिम्मेवारी लिएको थियो ।
२०७३ साल असार २४ गते १५ मिटरको पुल फेरी १ करोड ५१ लख ४१ हजार ८ सय ७४ रुपैया ९४ पैसा रकम सम्झौता भएको कार्यालय प्रमुख रावलले बताउनुभयो । पुल निर्माण भएपछि जुम्लाको गुठिचौर गाउँपालिका सहित डोल्पा र जाजरकोट जान सजिलो भएको पृर्वाधार विकास कार्यालय जुम्लाले जनाएको छ ।
डोल्पा जुम्ला संग जोडिएपछि स्वास्थ्य, शिक्षा र पर्यटनका हिसावले जुम्लालाई टेवा पुग्ने उद्योग वाणिज्य संघ जुम्लाका अध्यक्ष रविअली मनिहारले बताउनुभयो ।
जिल्लाको पर्यटकीय क्षेत्र गुठिचौर,चोत्रा होमस्टे हुदैँ डोल्पाको दुनै हुदै से– फोक्सुण्डो यात्राको लागि पनि सहज हुने भएको छ ।